Iindaba -Ukususa ilitye kwinkqubo yokusila umgubo
Kwindawo yokusila umgubo, inkqubo yokususa amatye kwingqolowa ibizwa ngokuba yi-de-stone. Amatye amakhulu namancinci aneentlobo ezahlukeneyo zamasuntswana kunalawo engqolowa anokususwa ngeendlela zovavanyo ezilula, ngelixa amanye amatye anobukhulu obulinganayo nengqolowa efuna izixhobo ezikhethekileyo zokususa amatye.
I-de-stoner inokusetyenziswa ngokusebenzisa amanzi okanye umoya njengesixhobo esiphakathi. Ukusetyenziswa kwamanzi njengendawo yokususa amatye kuya kungcolisa ubutyebi bamanzi kwaye kunqabile ukuba kusetyenziswe. Indlela yokususa ilitye ngokusebenzisa umoya njengesixhobo esibizwa ngokuba yindlela eyomileyo. Indlela eyomileyo ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokugaya umgubo, kwaye izixhobo zayo eziphambili ngumatshini wokususa amatye.
I-Destoner ikakhulu isebenzisa umahluko kwisantya sokumiswa kwengqolowa kunye namatye asemoyeni okususa amatye, kwaye eyona nto isebenza kuyo yindawo yokugungxula ilitye. Ngexesha lomsebenzi, ilitye lokususa ilitye lingcangcazela kwicala elithile kwaye lazise ukuhamba komoya okungena ngokunyuka, okujongwa ngumahluko kwisantya sokunqunyanyiswa kwengqolowa kunye namatye.
Ukukhetha inkqubo wokugaya umgubo wengqolowa
Kwinkqubo yokucoca umgubo wengqolowa, ukungcola okungafaniyo nengqolowa kwizinto ezingafaniyo ngumahluko kubude okanye imilo yeenkozo ibizwa ngokuba kukhetho. Ukungcola okususwe kwizixhobo ezikhethiweyo kuhlala kuyirhasi, ihabile, iihazeluts kunye nodaka. Phakathi koku kungcola, irhasi kunye neehazelnuts ziyatyiwa, kodwa uthuthu, umbala kunye nokungcamla kunefuthe elibi kwimveliso. Ke ngoko, xa imveliso ingumgubo wenqanaba eliphezulu, kufuneka usete ukhetho kwinkqubo yokucoca.
Kuba ubungakanani bamasuntswana kunye nesantya sokumiswa kokungcola kufana nqwa nengqolowa, kunzima ukuyisusa ngokuyihlola, ukususa amatye, njl.njl. Izixhobo zokukhetha eziqhelekileyo ezisetyenziswayo zibandakanya umatshini wesilinda ongenanto kunye nomatshini wokukhetha ojikelezayo.